Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड - DIY विद्युत स्केटबोर्ड बारेमा
साथ बिजुली स्केटबोर्ड तातो र आधुनिक जवान मानिसहरूले स्वागत गर्दै छन्, लामो स्वामित्व रूपमा एक उत्कृष्ट विद्युत ब्यालेन्स बोर्ड , तिनीहरूले आफ्नै प्राथमिकताहरू अनुसार केही DIY गर्न बढी सम्भावना हुन्छ। हालै म इन्स्टाग्राम केही सुन्दर DIY स्केटबोर्ड पत्ता।
गति: एक तीब्र ई-longboard तपाईंलाई मदत गर्नेछ आफ्नो गन्तव्य समयमा सफल गर्न। प्रति घण्टा सामान्य गति 30km, माथि गति छिटो जानुहोस्, प्रति घण्टा 45 किमि आइपुगे गर्न सकिन्छ। अर्को मूल्यांकन विद्युत स्केटबोर्ड सबै दैनिक यात्रा, यस्तो छोटो-यात्रा रूपमा, किनमेल त्यसैले पूरा गर्न भनेर जानेछ र उपकरण हो।
को को Koowheel खरीदार को शो निम्न छन् इलेक्ट्रिक longboard स्केटबोर्ड इन्स्टाग्राम हामी चयन कि D3M। जो एक तपाईंलाई रुचि गर्छन्? तिनीहरूले सुन्दर र शानदार छन्। Koowheel धेरै छ फैशन बिजुली स्केटबोर्ड यसको दक्षता द्वारा चकित छन् अनुयायीहरूलाई को एक भारी आधार धान्ने छ। किन यति तातो छ? यो दोहोरो Brushless हब-मोटर्स, को CanadianMaple काठ + ग्लास फाइबर (वैकल्पिक) 7-पत्र, द अवकास जमीन 85mm (3.35inch) छ, शहर मा सबै सडक लागि उपयुक्त छ। यसबाहेक, प्रतिस्थापन ब्याट्री प्याक, 2pcs ब्याट्री पैक, पछिल्लो गर्न सक्छन् 60 किमि लामो जानुहोस्। त्यसैले हामी उच्च आशा थियो र यसलाई अन्ततः आएपछि stoked गरिएको छ।
तपाईंले यी रचनात्मक DIY देख्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो मन मा एक अधिक अद्वितीय विचार छ? धेरै विचार बनाईएको हो मानिसहरूले, तपाईंले धेरै सकेसम्म आफ्नो अद्वितीय विचार देखाउने र त्यसपछि आफ्नो इन्स्टाग्राम मा ट्याग Koowheel हामीलाई साथ कृपया साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ। Koowheel आधिकारिक वेबसाइट र फेसबुक आफ्नो KOOWHEEL अनुभव साझेदारी हुनेछ।
तिनीहरूले यात्रा सकिनँ, तर छोटो समयमा सिके। यी कुराहरूमा राउन्ड अनुभव गर्न कुल hoot छन्। यसलाई तपाईं लैजान सार्वजनिक परिवहन र यसलाई आफ्नो बाटो निवास मा सवारी। हालै, Koowheel विकास 2nd उत्पादन विद्युत स्केटबोर्ड Kooboard प्रतिस्थापन पाङ्ग्रा संग। अब प्रिअर्डरको स्वीकार गर्न सकिएन। शायद तपाईं के2मा नयाँ भन्ने माग्दछ ND पुस्ता एक? मलाई तल तपाईंलाई बताउन गरौं।
1 नयाँ mainboard
2. नयाँ रिमोट
3. नयाँ मोटर्स / पाङ्ग्राहरू
97MM मोटर्स / पाङ्ग्रा
नयाँ 350W एक्स बदली पु पाङ्ग्रा संग2मोटर्स
अद्वितीय डिजाइन मोटर्स maximumly ठंडा मदत गर्नेछ
4 अद्यावधिक ब्याट्री
ब्याट्री जोगिन जडान मुद्दा को नयाँ कनेक्टरों
नयाँ कार्यक्रम regenerative ब्रेक लगान द्वारा चार्ज देखि ब्याट्री सुरक्षित हुनेछ। त्यसपछि Kooboard बिस्तारै र स्टप तोडने हुनेछ। नयाँ गोमेद डेक र पकड टेप, र थप ...